कसरी बने प्रचण्ड–ओली नङमासु ?
काठमाडौं । यतिवेला एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्बन्ध नङमासु जस्तै भएको छ । दुवै नेताले एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई मन नपराउने भएकाले उनीहरुको सम्बन्ध निक्कै नजिकीएको हो । एमाओवादीलाई देख्नै नसक्ने ओली यतिवेला प्रचण्डसँग मिलेर जान आतुर छन् । ओली निवास बालकोटमा गत साता प्रचण्ड भेट्न पुगेका थिए र उनले सरकार परिवर्तनका लागि ओलीसँग प्रस्ताव राखे । प्रचण्डले ओलीलाई दुई महत्पूर्ण प्रस्ताव राखेको स्रोतले बताएको छ । एमाले अध्यक्षमा माधव नेपाललाई हराउने र अध्यक्ष बनाउने, अध्यक्षसहित संसदीय दलको नेताका आधारमा मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्री पनि ओलीलाई बन्नका लागि प्रचण्डको अनुरोध थियो । ओलीले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो इच्छा नदेखाउँदा एमाओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नसकिने प्रस्ताव गरेका प्रचण्डले माधव नेपाललाई पराजित गर्नका लागि जस्तोसुकै सहयोग पनि गर्ने वचन दिएका थिए ।
केटीलाई राहदानीमा केटा बनाइदिएपछि.....
काठमाडौं । राहदानी बनाउन दिएको फोटोमा युवती झल्कने प्रष्ट तस्बिर छ । नागरिकतामा स्पष्टसँग लिङ्ग खुलाइएको छ । तर पनि राहदानी बनेर आउँदा लिङ्गमा किन ‘मेल’ अर्थात पुरुष जनिनेगरी ‘M’ लेखेर राहदानी आउँछ ? यो सम्बन्धित निकायको चमर लापरबाहीको नमुना हो । अर्जेन्ट भन्दै बैतडी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दश हजार रुपैयाँ तिरेर पासपोर्ट बनाउन दिएको निवेदन पासपोर्ट बनेर आउँदा गल्ती आयो भने मान्छेलाई कस्तो तनाव महसुस हुन्छ ? जोसुकैले अनुभव गर्न सक्नछ । यस्तै घटना एक जना तेक्वान्दो खेलाडिलाई परेको छ । कोरियामा हुन लागिरहेको आठौं विश्व तेक्वान्दो कल्चरल एक्पो प्रतियोगितामा सहभागि हुन जान लागेकी तेक्वान्दो खेलाडि बसन्ती बोहरालाई परेको पीडा हो यो । बसन्ती रक्षा तेक्वान्दो डोजाङबाट प्रतिनिधित्व गर्दै कोरियातर्फ जान लागेकी हुन् ।
ब्राजिलमा विश्वकप फुटवल, नेपालमा अवैध सट्टेबाजी /
रोशन पाण्डे / काठमाडौं । बिश्वको ध्यान यतिखेर सर्बाधिक लोकप्रिय विश्वकप फुटवल खेलमा केन्द्रित रहेका बेला नेपालमा भने त्यसको सट्टेबाजी ब्यापक हुन थालेको छ । नेपालमा सट्टेबाजी गर्ने गिरोहको कनेक्सन प्रत्यक्ष मुम्बईसम्म रहेको स्रोतले बताएको छ । नेपालमा सट्टेबाजी खेलाउने गिरोहले मुम्बईसम्म सम्पर्क गर्ने मात्र नभई सट्टेबाजीको बोलकबोल फोन र ईन्टरनेटमार्फत हुने गरेको छ । बिश्वको हरेक नागरिक वल्र्डकपको शिल कसले उचाल्छ ? भन्ने खुलदुलीमा रुमलिएका बेला नेपालका जुवाडे भने कुन खेलमा कति पैसा लगाउने र कति कमाउने भन्ने दाउमा छन् । स्रोतका अनुसार वल्र्डकपको बहानामा नेपालमा रहेका दलाल तथा जुवाडेले करोडौं कमाउन सपनामा उनीहरुको रात वित्न थालेको छ । वल्र्डकपको बहानामा जित र हारको जुवा खेलाइनु सरासर गैरकानूनी हो । यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ‘बुकी’ खेल भनिन्छ । सवैभन्दा बढी बुकीको अवैध धन्दा छिमेकी मुलुक भारतमा हुने गरेको छ ।
सभासद् सिंहले किन भेटे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई ?
काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा अक्टोपसका रुपमा चर्चित नेपाली काँग्रेसका सभासद् अमरेशकुमार सिंहको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भएको भेटपछि नेपालको प्रधानमन्त्री ठूलो कि सिंह भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । ब्यक्तिगत भेटका लागि निम्तो दिने मोदी नेतृत्व सरकारले यति ठूलो ‘स्पेस्’ सिंहलाई किन दियो ? आश्चर्यको विषय बनेको छ । पक्कै पनि एउटा नेपाली नागरिकको भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेट गर्न सक्ने हैसियत हुनु राष्ट्रकै लागि गर्वको कुरा हो । तर, जननिर्वाचित सभासद्ले मुलुकको अस्तित्वबारे ख्यालै नगरि कुनै पनि निकायलाई जानकारीबिना भेट गर्न जानु कतिको जायज छ ? भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्न सिंहलाई कसले पठायो ? नेपाली काँग्रेसबाट दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सर्लाहीको क्षेत्र नं.६ बाट निर्वाचित भएका सिंहले नेपाल सरकारको मातहत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका थिए कि थिएनन् ? सिंहलाई नेपाली काँग्रेस पार्टीले भेट्न पठाएको हो कि होइन् ? नेपाली जनताले त्यसको उत्तर खोज्न थालेका छन् ।
यसरी हुन्छ वायु प्रदुषण नियन्त्रण
युवा नेता गगन भन्छन् : के सरकारले कार्यान्वयन गर्ला?
काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकावाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, ढल व्यवस्थापन, वायु प्रदुषण, यातायात व्यवस्थापन र उर्जा संकटका सन्दर्भमा साझा धारणा तयार गरेका छन। काँग्रेस नेता तथा काठमाडौं ४का निर्वाचित सभासद गगन थापाले आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धतापत्रमा आफ्नो क्षेत्रमा मात्र नभइ काठमाडौं उपत्यकाको बिकासको सन्दर्भमा एकिकृत धारणा वनाएर जाने प्रतिवद्धता गरे अनुसार निर्वाचित भएपछि उपत्यकाका सभासदहरुको बनाइएको अनौपचारिक मञ्चले साझा धारणा तयार गरेको हो। थापाले नेतृत्व गरेको यो मञ्चका तर्फबाट तयार गरिएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालालाई आइतवार बुझाइएको छ।
प्रतिवेदनमा खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, ढल व्यवस्थापन, वायु प्रदुषण, यातायात व्यवस्थापन र उर्जा संकटका सन्दर्भमा साझा धारणा बनाइएको छ।थापाले उपत्यकाका सभासको साझा पहल र धेरै युवा साथीहरुको प्रयास र मिहिनेतवाट यो प्रस्ताव तयार गरिएको बताउनुभयो। दीगो काठमाडौं विकासका लागि घनिभुत रुपमा बहस र छलफल हुन सकोस, साझा धारणा निर्माण हुन सकोस, सवैको सामुहिक पहलकदमी हुन सकोस भन्ने ध्येयका साथ हामीले यो प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै थापाले यस प्रस्तावमा टेकेर बस्नयोग्य र दीगो काठमाडौं निर्माणका लागि प्रस्तुत प्रस्तावहरू कार्यन्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीले सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुहुनेछ र सोहि आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नेछ, योजना र कार्यक्रम तय गर्नेछ र आगामी आर्थिक बर्षको वजेट विनीयोजन गर्नेछ भन्ने विश्वास लिदै यसतर्फ प्राथमिकताका साथ ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ। उपत्यकाका सभासदहरुका तर्फबाट बुझाइएको प्रतिवेदनको वायु प्रदुषण सम्वन्धी अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौ।
१.पृष्ठभुमि : काठमाण्डौं शहर एसियामा तिब्र शहरीकरण भइरहको शहरहरुको सूचिमा अग्रस्थानमा आउँछ । विश्व वैंकले हाल सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा औसत ५ प्रतिशतले शहरिकरणमा वृद्धि भएको देखाँउछ । वायुको गुणस्तर मुख्यत मानव क्रियाकलापमा निर्भर गर्दछ । काठमाण्डौ उपत्यकाको जनसंख्यामा बृद्धि सँगै भएको अव्यवस्थित शहरीकरणले भयानक वायु प्रदुषणको स्थिती निम्त्याएको छ । काठमाडौं वासीका लागि वायू प्रदुषण गम्भिर स्वास्थ्य समस्याको कारण मात्र नभएर मृत्युको कारण समेत बन्न पुगेको छ । काठमाडौंवासीले प्रत्येक दिन संकटमा वाँचिरहेका छन र यस्तो हावामा स्वास लिईरहेका छौं जसले जीवन होईन दिनप्रतिदिन विरामी बनाउदै गएको छ । केहि तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने पनि हामी कस्तो हावामा स्वास फेरिरहेका छौं भन्ने पुष्टि हुन्छ । सन २०१२ को वातावरणीय कार्यसम्पादन सुचकले विभिन्न आधारमा विश्वका १३२ देशहरूलाई गरेको मुल्याङ्कन अनुसार नेपाल ३८औं स्थानमा थियो भने वातावरणीय स्वास्थ्य विधामा हाम्रो स्थान १०६ औ मा थियो । हावाको गुणस्तरले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असरमा हाम्रो स्थान १३०औं र पानीको गुणस्तरले मानव स्वस्थ्यमा पार्ने असरमा १०२ औं स्थानमा नेपाल रहेको थियो । हालैका दिनहरुमा भएको अध्ययनमा काठमाण्डौं दक्षिण एसियाका शहरहरु मध्ये सबैभन्दा बढी प्रदुषित शहरहरुको सूचीमा उभिएको छ । पर्यटकीय गन्तव्य भनेर चिनिने काठमाण्डौं शहर आज संसारकै प्रदुषित शहरहरुको सुचिमा पर्नु हामी सवैका निम्ति लज्जाको विषय हो ।
विश्व स्वास्थ संगठनले तोकेको पि.एम.10 मापदण्ड भन्दा २० गुणा बढी मात्रामा काठमाण्डौंको हावामा पाइने गरेको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । विश्वमा प्रत्येक बर्ष २१ लाख मानिस पी.एम २.५ नामक बिषालु प्रदुषणका कारणले मर्छन । सयुंक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणीय कार्यक्रमले पनि स्पष्ट देखाएको छ की पि.एम २.५ र पी.एम १० बीचको सुक्ष्म कणले मानव स्वास्थ्यमा ठुलो असर पार्दछ । पी.एम १० वायु प्रदुषं मध्ये सबैभन्दा बढी हानिकारक छ । स्वास लिंदा यी शुक्ष्म कणले हाम्रो स्वासप्रणालीको स्वभाविक प्रतिरोधलाई छल्छन र फोक्सोमा प्रवेश गर्छन । काठमाडौंको वायूमा केहि बर्षयता उच्च तहको पी.एम २.५ र पी.एम १० भएको रेकर्ड छ ।
अत: काठमाडौंको वायूलाई सक्दो स्वच्छ बनाउन, वायु प्रदुषण नियन्त्रण गर्न र काठमाडौंलाई बस्नयोग्य वनाउन यस सम्वन्धि नीतिको विकास र कार्यन्वयन अपरिहार्य छ । बाटो निर्माण र विस्तारवाट सिर्जित धुलो नियन्त्रण सँगै भविष्यमा धुलो प्रदुषणस्तर कम गर्न शहरमा धुलो नियन्त्रणका उपायहरूको खोजी गर्नु पर्दछ । वायु प्रदुषण सवारी साधनसँग पनि उत्तिकै जोडिएको छ । अत सवारी साधनको व्यवस्थापन अर्को महत्वपुर्ण पक्ष छ । उपत्यकाभित्रका ईटा कारखाना वायू प्रदुषणको मुख्य कारणको रुपमा छन । यि सवैको समाधानको उपायको खोजी गर्दै धुलोको वहाव रोक्न उपत्यकामा यथेष्ट रुख रोप्ने योजना पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।यी सवै विषयहरूलाई ध्यानमा राख्दै यस प्रस्तावमा हामीले वायु प्रदुषणले स्वास्थ, वातावरण र दैनिक जिवनमा पार्ने असरहरुलाई उठाउदै त्यसको समाधानका निम्ति तत्काल गर्नु पर्ने र गर्न सकिने पहलहरुका सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।
एमाले भित्र ‘सिन्डिकेट’ हाबी : नेपाल
उदयपुर । नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीभित्र केही व्यक्तिको ‘सिन्डिकेट’ हाबी हुादै गएको बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपाल उदयपुर शाखाले आइतबार गाईघाटमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता नेपालले एमालेभित्र गुटको राजनीति हाबी भएको बताए । ‘पार्टीलाई नयाा दिशा दिने र लानेभन्दा पनि अहिले गुटबन्दी गरेर कसैलाई पाखा लगाउन ‘सिन्डिकेट’ बनाउने र गुटबन्दीको राजनीति सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘यो पार्टीका लागि हानिकारक हो ।
डलरमा पिपिए सम्झौता राष्ट्रिय हित विपरीत
काठमाडौं । सभासद्हरुले जलविद्युत्का क्षेत्रमा वैदेशिक मुद्रामा भएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) राष्ट्रिय हित विपरीत भएको बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासद्हरुले ३६ मेगावाटको भोटेकोसी र ६० मेघावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनामा डलरमा भएको सम्झौता राष्ट्रिय हित विपरीत भएको बताएका हुन् । बैठकमा सभासद्हरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वार्षिक रुपमा हुने एक अरब रुपियाा भन्दा बढी घाटामध्ये भोटेकोसी र खिम्ती आयोजनाको मात्र दुई तिहाई हिस्सा रहेको तथ्याङ्क पेस गर्दै सम्झौता पुनरावलोकनको माग गरेका थिए ।
डीआईजीहरुबीच प्रतिष्ठाको लडाँई, फाईदा आईजीपी अर्याललाई
काठमाडौं । बढुवा सिफारिस भएका सात जना र नभएका छ जना डीआईजीलाई एकआपसमा भिडाएर नेपाल प्रहरीको आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल भने सहज अवतरणको बाटो खोजिरहेका छन् । आन्तरिक प्रतिष्ठाको द्धण्द्धको फाईदा भने प्रत्यक्ष आईजीपी अर्याललाई हुने भएको छ । आफुलाई बढुवा सिफारिस गर्दा पाउनु पर्ने नम्बरसमेत नपाएको र बढुवा सिफासिस अवैध भएको भन्दै डीआईजी परशुराम खत्रीले पुनरावेदन अदालतमा रिट हालेको थिए । रिटमाथि सुनवाई गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि बढुवा सिफासिस कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारि गरेको थियो । त्यसको २४ घण्टा नवित्दै बढुवा प्रक्रिया रोक्दा कार्यसम्पादनमा ढिलाई हुने भन्दै बढुवा सिफारिस भएका सात जना डीआईजी उक्त रिट खारेजीको माग गर्दै पुनरावेदन अदालत पुगे । पुनरावेदनले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्ने भन्दै भोली आइतबार अदालतमा सवैलाई डाकेको छ ।
पर्यटकीय नगरी पोखराको फोहोर विजयपुर खोलामा
कास्की । पोखरा उप–महानगरपालिकाको फोहोर उठाउने जिम्मा लिएको बातावरणीय सुन्दर नेपाल प्रालिले सम्झौता विपरित पर्यटकीय नगरी पोखरा जोड्ने विजयपुर पुल मुनि खोलामा फाल्ने गरेको प्रमाण फेला परेको छ । सुन्दर बातावरणीय नेपालले पोखरा उपमहानगरको फोहोर बिजयपुर पुलसँगै खोलाको छेउमा संकलन केन्द्र बनाएको छ । उपमहानगरबाट उठेको फोहोरलाई उक्त कम्पनीले रातको समयमा खोलामा फालेर बगाउने गरेको प्रत्यक्षदर्शीले फोटो समेत उपलब्ध गराएका छन् । कानूनत खोलामा फोहोर फाल्नु अवैध मानिन्छ भने सम्झौतामा बाताबरणीय सुन्दर नेपालले ६८ प्रतिशत फोहोर स्रोतमै कुहाएर पुन: प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने तथा बाँकी फोहोर मात्र ल्याण्डफिल्डमा फाल्न पाउने उल्लेख छ । कम्पनीले सम्झौता अनुरुप कामै नगरी प्रायजसो फोहोर कास्कीको विजयपुरस्थित खोलाबाट फाल्ने र केही बाँकी फोहोर मात्र ल्याण्डफिण्डमा फाल्ने गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताए ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध समाचार बाचन गर्ने पत्रकारलाई हटाइयो
कास्की । सामुदायिक रेडियो सराङ्कोट १०४.६ मेघाहर्जमा कार्यरत पत्रकार कमल पौडेललाई पोखरा उप–महानगरपालिका कार्यकारी प्रमुख झलकराम अधिकारीले गरेका भ्रष्टाचार विरुद्द समाचार बाचन गरेको भन्दै विहानीको समाचार बाचनबाट हटाईएको छ । जुजारु युवा पत्रकार पौडेलले उप–महानगरपालिकामा भएका भ्रष्टाचार बारे आवाज उठाउँदै आएका थिए भने पछिल्लो समयमा अख्तियारले छापा मारेर महत्वपूर्ण कागजात जफत गरेको विषयमा रेडियो सराङ्कोट १०४.६ बाट समाचार बाचन गरेका थिए । उपमहानगरका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीको दबाव रेडियोमा परेपछि पत्रकार पौडेललाई विहानीको समाचार बाचनबाट हटाईएको हो । आफुलाई विहानीको समाचार बाचनबाट हटाइएपछि तत्काल त्यसको विरोध गर्दै पत्रकार पौडेलले वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हक हनन भएको भन्दै एक विज्ञेप्ती प्रकाशित गरि कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
यस कारण लगाइयो वामदेवलाई बोल्न प्रतिबन्ध
काठमाडौं । नवौं महाधिवेशनको माहोल तातिरहेका बेला एमालेभित्रका केही नेताहरुलाई फरक किसिमको मापदण्ड कायम गरिएको छ । गुट, उपगुटमा विभाजित भएको एमालेभित्र प्रभावशाली नेताहरुलाई नै वयानबाजीमा रोक लगाइएको छ । यस्तो रोक गुटका नेताहरुले लगाएपछि प्रभावशाली नेताहरुले सभामा त बोल्न नपाउने नै भएका छन्, बोले गुटबाट नै हटाउने चेतावनी पनि पाएका छन् । त्यस्तो चेतावनी पाउने नेता ओली गुटमा प्रभावशाली मानिएका उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम हुन् ।
महाधिवेशन अवधिका लागि केपी ओली क्याम्पमा पुगेका नेता वामदेव गौतमलाई बोल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । स्रोतहरुका अनुसार वामदेवको भाषणका कारण ओली क्याम्पमा समस्या आउने भएकाले उनलाई बोल्न प्रतिबन्ध लगाइएको हो । महाधिवेशनसम्म छुच्चो र आवेगमा आएर बोल्दा घाटा लाग्ने भएकाले वामदेवलाई बोल्न प्रतिबन्ध गरिएको हो ।
एसएसपी खरेलको शंकास्पद सम्वन्ध !
काठमाडौं । सेलिब्रेटिका रुपमा चर्चित एसएसपी रमेश खरेल किन विवादास्पद ब्यक्तिलाई भेट्छन् ? घरिघरी किन विवादमा तानिन्छन् ? भन्ने कुराले यतिखेर ब्यापक चर्चा पाएको छ । एसएसपी खरेल जस्ता स्वच्छ छवि भएका भनिएका प्रहरी अधिकृत भारतीय एम्वेसी नजिक रहेका ब्यक्ति र भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ का एजेन्टसँग किन उठवस गर्छन ? खोजिको विषय बनेको छ ।
नेपाल प्रहरीलाई जन्म दिने आमा बराबर सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने भावना भएका एसएसपी खरेल कहिले सुन र डलर तस्करीका बादशाह दिपक मल्होत्रा र भारतीय जासुस संस्था ‘रअ’सँग निकट मानिएका सभासद् अमरेशकुमार सिंहसँग एक रात्रीभोजमा देखिएपछि पुन: विवादमा तानिएका थिए । उक्त रात्रीभोज पछि अनेक आशंका उब्जिरहेका बेला एसएसपी खरेलको नाम ‘रअ’ का अर्का अण्डरकभर एजेन्टसँग जोडिएको समाचार जनप्रहार साप्ताहिकले मंगलबार प्रकाशित गरेको छ ।
पूर्वमा बलियो उपस्थिति देखाउँदै डीआईजी सिलवाल
सुनसरी । जागिर खाँदा खाएको कशमको बेवास्ता गर्ने, प्रहरीको आचरण बिरुद्ध काम गर्ने, सर्बसाधरणलाई बर्दीको आडमा दु:ख दिने र अवैध असुली गरि अकुत कमाउने सत्ताईस जना प्रहरीलाई पूर्वाअञ्चल प्रहरी प्रमुख डीआईजी नवराज सिलवालले कारवाही गरेका छन् । डीआईजी सिलवालले प्रहरी संगठनभित्रै बाट थालेको शुद्धीकरण अभियानले नेपाल प्रहरीमा राम्रो काम गर्ने प्रहरी पनि छन् भन्ने उदारहण भएको छ भने पूर्व क्षेत्रमा उनको बलियो उपस्थिति देखिएको छ ।
प्रहरीको पूर्व क्षेत्रिय कार्यालय बिराटनगरमा अवैध असुली गर्ने प्रहरीबिरुद्ध सर्वसाधारणले उजुरी हालेपछि डीआईजी सिलवाले अनुसन्धानपछि सत्ताइस जनालाई बर्खास्त र एक सय भन्दा बढीलाई निम्लबन गरेका हुन् ।
आदेश अटेर गर्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको कम्पनी सूर्य नेपाल
काठमाडौं । ‘सूर्य लक्सरी किङस’ नामक चुरोट विक्री वितरण गर्दा सूर्य नेपाल प्रालिले सरकारको आदेश अटेर गरेको प्रमाण फेला परेको छ । कम्पनीले सूर्य चुरोटको बाहिरी खोलमा देखिनेगरि धुम्रपान तथा सूर्ति सेवनले फोक्सोको क्यान्सर हुन्छ लेखिएकोसँगै ठिक तल क्यान्सर लागेको तस्बिरमा स्टिकर राखेर लुकाउने गरेको छ । सिल प्याक गर्दा नै क्यान्सर लागेको फोटोमाथि कम्पनीले खोल बाहिरबाट छुट्टै कभर राखि सिलभित्रको तस्बिर छोप्नेगरि सूर्य उदाउँदै गरेको स्टिकर बनाई अग्रेजीमा ‘हाभ अ नाईस डे’ भन्दै लेखेको छ । खरिद गरेको समयमा दुबै भागमा राखिएको क्यान्सरको तस्बिर भने उक्त स्टिकरका कारण खरिदकर्ताले देख्दैनन् ।